IZINDLU EZILI-12 KWITSHATI YAKHO YOKUZALWA | LUNAR & LILAC ASTROLOGY - UKUVUMISA NGEENKWENKWEZI
Eyona Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Uzitolika njani izindlu ezili-12 ezikwiTshati yakho yokuzalwa
I-Astrology House Calculator yasimahla: itshati yakho yokuzalwa yahlulahlulwe yangamacandelo ali-12 - aziwa ngokuba zizindlu - Bala itshathi yakho, ufunde izindlu zakho ezizodwa, kunye nokunye.
Ukuvumisa ngeenkwenkweziNge-7 Okthobha, 2021
Ukuba ubukhe wadlala ngokuvumisa ngeenkwenkwezi ngalo naliphi na ixesha - ukhe wabuzwa malunga nezindlu kwitshathi yakho yokuzalwa. Ngokuvumisa ngeenkwenkwezi, izindlu ezilishumi elinambini zezodiac nganye imele umxholo omkhulu wobomi bakho njengomsebenzi wakho, ubomi bothando, imvakalelo yokuzazi, kunye nokunye. Ukuqonda izindlu ngokuvumisa ngeenkwenkwezi yeyona nto ibalulekileyo ukuze ube ngumvumisi ngeenkwenkwezi ozifundise ngokwakhe.
IiNkqubo zeNdlu ezidumileyo kwi-Astrology
Esinye sezona zigqibo zikhulu zizazi ngeenkwenkwezi ezintsha kukhetha inkqubo yendlu abangathanda ukuyifundela. Izindlu ngokuvumisa ngeenkwenkwezi azilungiswanga ngokweenkwenkwezi kuba zisekelwe kuphawu lwakho lokunyuka, okuthetha ukuba abavumisi ngeenkwenkwezi banamhlanje basebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuzahlula. Izazi ngeenkwenkwezi ezininzi zasentshona zisebenzisa iplacidus, okanye uphawu olupheleleyo.
I-Placidus yeyona nkqubo yendlu isetyenziswa kakhulu kwinzululwazi yeenkwenkwezi yanamhlanje. Isekelwe kwinkqubo yolwahlulo lwendlu, ethandwa yimonki yase-Italian Benedictine Placido de Titus (1603-1668); kwaye ibala izindlu ngokusekelwe kwi-tri-section ye-arc semi-diurnal, inkqubo eyahlula umgama kunye nexesha phakathi kwe-Mideaven kunye ne-Ascendant. Kwinkqubo yePlacidus – ayizizo zonke izindlu 30 ° – ezinye zinokuba nkulu kunezinye.
Ukubala itshathi yakho yokuzalwa ngesandla usebenzisa iPlacidus akulula, nangona kunjalo, inkqubo yePlacidus yokuvumisa ngeenkwenkwezi yeyona nkqubo idumileyo yendlu esetyenziselwa ukubala ngeenkwenkwezi kwi-Intanethi.
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi koMqondiso oPheleleyo kusekwe kwisithethe samaGrike sokuvumisa ngeenkwenkwezi, kwaye ikwasetyenziswa kwinzululwazi yemveli yamaIndiya. Kuyo yonke inkqubo yendlu yemiqondiso yonke indlu ikwicandelo elilinganayo levili leenkwenkwezi (izindlu ziyi-30 ° nganye) kwaye indlu yokuqala iqala ku-0 ° nakweyiphi na indawo ehlala kwi-cusp ye-acendant. Indlu yesibini yayiza kuqala ngokukhawuleza kwisibonakaliso esilandelayo kwi-zodiac, indlu yesithathu yayiza kuqala kwisibonakaliso emva koko, njl.
(Umzekelo: Ukuba ubuyi-Aries Rising, kwi-Whole Sign astrology i-1H ​​yakho yayiza kuqala ku-0 ° e-Aries, indlu elandelayo yayiza kuqala ku-30 ​​° e-Taurus, indlu elandelayo yayiza kuqala ku-60 ° e-Gemini, njl.
ikama phezu kokuchetywa kweenwele
Vedic | ISidereal ngeenkwenkwezi
Umahluko ophambili phakathi kwezi nkqubo zimbini kukuba iVedic zodiac yiSidereal kwaye iWestern zodiac yiTropiki. I inkqubo sidereal isekelwe phezu yangoku indawo ekuma kweenkwenkwezi . Ngaba oko kunokwenza umahluko omkhulu ngenene kwitshathi yakho? Uyabheja! Kukho umahluko ongamashumi amabini anesine phakathi kwenkqubo yecala kunye nenkqubo yetropiki. Oko kukuthi Itshathi yakho yokuzalwa yaseSidereal kusenokwenzeka ukuba yahlukile kwitshathi yakho yetropiki.
Kwi-astrology yaseSidereal, i-zodiac yeVedic ihambelana neqela leenkwenkwezi ze-27 (Nakshatras) ezenziwe ngeempawu ze-zodiac ezili-12, iiplanethi ezili-9 kunye nezindlu ze-12 kunye nendlu nganye kunye neplanethi emele inkalo ethile yobomi bomntu.
Akukho mpendulo ichanekileyo okanye engalunganga xa kuziwa ekukhetheni inkqubo yendlu yakho. Ngokwam, Ndisebenzisa iPlacidus House System (kwaye zonke iikhaltyhuleyitha kwiwebhusayithi yam zenza ngokunjalo). Zama itshathi yakho yokuzalwa kwinkqubo nganye yendlu kwaye ukhethe leyo ithetha nawe!
Ukufumana izindlu kwitshathi yakho yokuzalwa kulula! Faka nje ixesha lakho lokuzalwa, umhla, kunye nendawo esi sixhobo simahla ukusuka abahlobo bethu kwi-Astro-Charts :
ithini itshathi yam yokuzalwa
I-AFFILIATE DISCLOSO: iwijethi enikezelwe ngasentla kweSIXHOBO SAMAHHALA. Ukuba ukhetha ukuthenga ingxelo ehlawulweyo nge-Astro-Charts.com; Ndingafumana ikhomishini edibeneyo. Intlawulo ayifunyanwa ngathi. Nceda uqhagamshelane: admin@astro-charts.com ngemibuzo.
Uzifunda njani Izindlu ezikwiTshati yakho yokuZalwa
Nje ukuba ube nekopi yetshathi yakho yokuzalwa, lixesha lokufumana izindlu zakho. Qala ngokufumana uphawu lwakho olunyukayo kwivili lakho lokuzala. Ukunyuka kwakho kuyindawo yokuqala yetshathi yakho yokuzalwa kwaye iya kuhlala ikhona kwi-1H yakho Ukuba ucinga amacandelo etshathi yakho yokuzalwa ngendlela efanayo newotshi, ukunyuka kufuneka kubekwe malunga nentsimbi ye-9.
Ukuhamba ukusuka apha ngokuhambelana newotshi, ungafumana uphawu lwendlu yakho nganye ewela kulo. Njengoko ubona kumzekelo ongasentla - uninzi lwezindlu zikaBillie zinkulu kunezinye. Ukuba sijonga ngokusondeleyo ekuqhekekeni kwetshathi yakhe, unokubona apho indlu yakhe nganye iqala khona kwivili lezodiac.
Okulandelayo-sebenza ekufumaneni iiplanethi ezindlwini zakho ngokufumana iiglyphs ezihambelanayo kwitshathi yakho. Jonga kuluhlu lweesimboli ze-zodiac kwaye ufumane ukuba yeyiphi indlu iplanethi yakho nganye iwela kuyo. Oku kuya kukunika umongo owongezelelweyo wokuba amandla akho alele phi, apho uya kuba nethamsanqa ebomini, nalapho unobunzima khona.
Fo r umzekelo: UBillie Eilish uneLanga lakhe, iMercury, kunye neChiron kwiNdlu yakhe ye-10 eSagittarius. Akumangalisi ukuba enze umsebenzi omkhulu kangaka ekubhaleni iingoma ezilusizi kodwa ezidanisayo! Zonke ezi planethi zijongene nengqiqo yakhe, ukunxibelelana kwakhe, kunye namanxeba akhe ahlala kwindlu yomsebenzi wakhe kunye nomfanekiso woluntu (10H) ephenjelelwa yindalo, amandla aguquguqukayo omqondiso womlilo weSagittarius!
Ziziphi izindlu ezingenanto kwi-Astrology?
Indlu engenanto kwi-astrology ithetha ukuba akukho ziplanethi zendalo ezikuloo ndlu. Kukho iiplanethi ezili-10 kuphela ekuvumiseni ngeenkwenkwezi, ngelixa kukho izindlu ezili-12. Oku kuthetha ukuba wonke umntu unezindlu ezi-2 ubuncinane ezingenanto kwitshathi yakhe yokuzalwa. Abanye abavumisi ngeenkwenkwezi banexhala lokuba izindlu ezingenanto zimbi okanye bayazibuza ukuba zinokutolikwa njani.
Umzekelo: UBillie une-2H engenanto edla ngokulawula imali. Oku akuthethi ukuba akakho ebhegini yakhe. Ithetha nje ukuba amabhongo akhe amakhulu obomi ayisiyokwenza imali, njengokuba kunjalo kwindlela azichaza ngayo-- (nangona imali ingenzi buhlungu)! Xa utolika izindlu ezingenanto kwi-astrology, kufuneka jonga kumqondiso kwincam yendlu kunye nomlawuli wayo weplanethi.
Nantsi ukuhlaziya ngokukhawuleza kwabalawuli beplanethi:
I-Scorpio: iPluto (iplanethi yemveli: iMars)
I-Aquarius: Uranus (iplanethi yemveli: iSaturn)
IiPisces: Neptune (iplanethi yemveli: Jupiter)
Qala ngokufumana uphawu lweZodiac kwi-cusp yendlu engenanto ofuna ukufunda ngakumbi ngayo. Olu phawu lubonisa indlela ojongana ngayo nemiba yale ndlu kwitshathi yakho yokuzalwa. Nangona amandla anokuba nempembelelo encinci ngenxa yokungabikho kweeplanethi kule ndlu, usenokufunda okuninzi malunga nawe ngokuqonda ukuba loluphi uphawu olulawula izindlu zakho ezingenanto.
Intsingiselo yeeNdlu ezili-12 kwi-Astrology
Indlu yoku-1: Ulwazi kunye nesiqu sakho
Indlu ye-1 iqala i-Zodiac kwaye mhlawumbi yeyona ndlu ibalulekileyo kwitshathi yokuzalwa kuba ilawula ukuzazisi. Iiplanethi ezingaphakathi kule ndlu zibonisa undoqo wethu wendlela esizibona ngayo, kunye nendlela abanye abasibona ngayo. Indlu yoku-1 inokuchaphazela izinto ezininzi, ezinje: inkangeleko yakho , yakho isazisi sakho , kwaye i umbono wokuqala uyancama. Inokukuxelela okuninzi malunga neyakho isimbo sobunkokeli kunye iintlobo ze iziqalo ezintsha unokubona ngexesha lobomi bakho.
Indlu yesi-2: Izibonelelo kunye nezinto eziphathekayo
Indlu ye-2 yeZodiac ilawula phezu kwezinto zethu zemali kunye nezinto eziphathekayo. Iiplanethi ezikwindlu yesi-2 zidla ngokufumana imvakalelo yokhuseleko ngokuqokelela ubutyebi bezinto eziphathekayo. Indlu ye-2 inokuchaphazela izinto ezininzi, ezinje: yakho ixabiso , yakho umvuzo kwaye imali , kunye neyakho indlela yokusebenza. Inokukuxelela okuninzi malunga neyakho imikhwa ukuze uphumelele kwaye ziphi izinto kukunceda uzive usekelwe.
Indlu yesi-3: Ingcinga kunye nokuHlola
Indlu ye-3 ilawula unxibelelwano, ingcamango, kunye nobudlelwane bethu phakathi kwabantu. Iiplanethi kwindlu ye-3 zikhuthazwa yintetho kwaye zihlala zakha ubudlelwane obusondeleyo nabanye kungakhathaliseki ukuba bayaphi ebomini. Indlu yesi-3 inokuchaphazela izinto ezininzi, ezinje: indlela oqiqa ngayo izinto , yakho isimbo sonxibelelwano , kwaye wena umdla wasekuhlaleni. Inokuba nefuthe udibana njani nabantu njengabahlobo bakho, usapho kunye nabamelwane.
Indlu yesi-4: Usapho kunye neKhaya
Indlu yesi-4 ilawula zonke izinto zentsapho, ikhaya, kunye neemvakalelo. Le ndlu yesi-4 ihleli ngokuthe tye ezantsi kwevili leZodiac kwaye isebenza njengesiseko setshathi yakho. Indlu yesi-4 inokuchaphazela izinto ezininzi, ezinje: imvakalelo yakho yokuba ngasese , yakho iimfuno zeemvakalelo , kwaye indlela othanda ngayo ukuziva ukhuliswe okanye ukukhulisa abanye. Inokukuxelela okuninzi malunga indima yakho njengomama okanye ubudlelwane bakho nomama wakho .
Indlu ye-5: Ukudala kunye ne-Romance
Indlu ye-5 ilawula phezu kwezinto ezifana nobuchule, idrama, kunye nokuzibonakalisa. Indlu ye-5 inokuchaphazela izinto ezininzi, ezinje: uthanda njani ukuthandana , uhlobo izinto ezikuvuyisayo, kwaye indlela othanda ngayo ukuphumla kwaye udlale . Oku kwahlukile kulawulo lwendlu yoku-1 olulawula ukuzazisa. Indlu yakho ye-1 ikuxelela indlela ozibona ngayo, indlu yakho ye-5 ikuxelela indlela ozivakalisa ngayo.
Indlu yesi-6: Inkqubo kunye neNkonzo
Indlu ye-6 ilawula phezu kwezinto ezifana nentlangano, imihla ngemihla, kunye nentlangano. Oku kunokubandakanya izinto ezifana: yintoni ekwenza uzive uxatyisiwe, indlela othanda ngayo ukukhonza abanye , kwaye zeziphi iindlela ezikuncedayo ukuba uhlale ubhadlile. Inokukuxelela okuninzi malunga neyakho impilo kunye nokuba sempilweni.
Indlu ye-7: Intsebenziswano yexesha elide
Indlu ye-7 ilawula zonke iinkalo zobomi bakho bobudlelwane bothando kunye nokunye. Kodwa kubalulekile ukukhumbula ukuba ubudlelwane abukho nje uthando! Iiplanethi kwindlu ye-7 zivame ukugxila ukwakha ubudlelwane kunye nentsebenziswano ebomini . Indlu yesi-7 inokuchaphazela izinto ezifana nezi: into oyixabisayo kwiqabane lothando , yakho iminqweno yeshishini elinokubakho , kwaye uyichaza njani ingqiqo yakho yobulungisa .
pisces iplanethi umlawuli
Indlu ye-8: Iimfihlo kunye noTshintsho
Indlu ye-8 ilawula izinto ezifana nokuzalwa, ukufa, isondo kunye nokuguqulwa. Iiplanethi ezikwindlu yesi-8 zizifumana zitsaleleke kwizinto ezingaziwayo kwaye ziya kuhlala zizihlaziya izihlandlo ezininzi kubo bonke ubomi babo. Indlu ye-8 inokuchaphazela izinto ezininzi, ezinje: indlela oqhuba ngayo kunye nokusingatha iimvakalelo ezinzulu , ziziphi izinyanzelo okanye iminqweno efihlakeleyo onayo , kwaye yintoni ekwenza uzive unomtsalane kuwe nakwabanye.
Indlu ye-9: Ulwazi kunye nokufuna
Indlu ye-9 ilawula izinto ezifana nokufuna ulwazi, ukuhamba, kunye nokwandiswa. Iiplanethi kwindlu ye-9 ziya kuziva impembelelo ye ukuzulazula . Bazi ukungaphumli , kunye nokuba nengqiqo enzulu umdla . Indlu yesithoba inokuchaphazela izinto ezininzi ezinje; zeziphi iingcamango oziva uphenjelelwa zizo kwaye uthanda ukufuna ulwazi . Kwaye ngamanye amaxesha nokuba yeyiphi inkalo yemfundo ekufuneka uyilandele ngokusekwe kuyo yintoni ekwenza uzive unomdla.
Indlu ye-10: Umsebenzi kunye noLuntu loLuntu
Indlu ye-10 ilawula phezu kwezinto ezifana ne-public persona yakho, umsebenzi wakho wexesha elide, kunye nendlela othanda ngayo ukwakha ubomi bakho. Indlu yeshumi inokuchaphazela izinto ezininzi ezinje: indlela abanye abasijonga ngayo ngobuchule , wethu igalelo elinokubakho kuluntu , njengo yenza ingqiqo kulwalamano lwakho notata wakho. Ngokuchasene nendlu yakho yesi-4, ehlala ezantsi kwetshathi yakho, indlu ye-10 ibekwe phezulu kwitshathi yakho nokuba kufutshane okanye kanye kwiMideaven yakho. I-Mideaven kwi-Astrology kulapho uya kufumana khona isiphelo somsebenzi wobomi bakho. Nokuba yeyiphi indawo oyifumanayo apha kwiNdlu ye-10 iya kuba nemixholo ephambili, yexesha elide ebomini bakho.
Indlu ye-11: Uluntu kunye nemvukelo
Indlu ye-11 ilawula phezu kwezinto ezifana noluvo lwethu loluntu kunye nombono wethu wehlabathi, kunye nethemba kunye namaphupha ethu ekamva. Isibonisa indlela esithanda ukuziva siqhagamshelene ngayo kunye nendlela esizibona ngayo singena kumfanekiso omkhulu. Indlu ye-11 inokuchaphazela izinto ezininzi ezinje: yeyiphi indima esiyidlalayo kumaqela abahlobo bethu , yintoni esenza sizive siqhagamshelene nabanye , kwaye ukuba umbono wethu wekamva eliqaqambileyo unokukhangeleka njani .
Indlu ye-12: Iminqweno efihliweyo kunye namaphupha
Indlu ye-12 ilawula phezu kwezinto ezifana namaphupha ethu, iingcamango, kunye neminqweno efihliweyo. Inokusebenza njengomthombo wenkuthazo yendlela owenza ngayo ubomi bakho. La ngamalungu akho kuphela owaziyo ngokwenene. Indlu ye-12 inokuchaphazela izinto ezininzi ezinje: yethu uloyiko olunzulu ngokwasengqondweni kunye neminqweno, indlela esithanda ngayo ukuhlaziya kunye nokuphumla imiphefumlo yethu , kunye nokubonisa zeziphi iindawo zobuntu bethu esizigcina ngaphantsi komhlaba.
iimveliso zeenwele ezigobileyo zamadoda
i-phoenix iphuma kwi-tattoo yothuthu
isimbo seenwele zamakhwenkwe akwishumi elivisayo